China Rotary Ultrasonic Welding Machine Compact Ultrasonic Seam Welding Machine fekitari uye vagadziri Powersonic
Michina Ultrasonic Welding Machine Compact Ultrasonic Seam Welding Machine
Nyanga: Simbi / titaniu
35Khz yakakwenenzverwa emagetsi michina yekutakurisa yeiyo ultrasonic seams
35Khz yakakwenenzverwa rotary runyanga zvakagadzirirwa iyo ultrasonic yekusonera kutenderera.
ltrasonic's inogona kushandiswa kune akasiyana siyana akagadzirwa machira nemapurasitiki, nemicheka yechisikigo zvakare iri kugona kushandiswa neyakaganhurirwa zvemukati of kanokwana 60% thermoplastic.
Zvishandiso zvinoshandiswa zvakanyanya kusimbisaing uye kucheka firita mabhegi asina tsono yekuzora kune isina huremu yemukati uye mbatya yemitambo kujoina kuVelcro tambo yekubatana nezvimwe.Kunyangwe yakafanana nechitarisiko uye kushanda kune echinyakare ekusona michina, iyo SeamMaster High Mbiri bonder ine yakakwira mvumo pakati pevhiri nenyanga, ichichiita icho chakanakira kune-inotungamirwa nemaoko nekutsiga kwakasimba, kana kana pakushanda kwakakomberedza macurves.
Mushoni wekusonesa wakasarudzika uye uri nyore kushandisa kuitira kusona, kucheka, kutsemura, kucheka, kuisa, kusimbisa, kana kucheka nekuvhara panguva imwe chete. Maitiro anoshandiswa neese emuchina wekusona emuchina anokurumidza, akapusa uye anoshanda.
Ichokwadi tekinoroji inochinja. Nekuda kwekuchinjika kwemagadzirirwo ayo, zvinokwanisika kumisikidza mushini wekusona pabhenji rebasa kana kuiisa mumasemi kana akazara masystem.
Amplitude yekudengenyeka (a) 15 ~ 25 µm
Chishandiso zvinhu simbi / titanium
Welding upamhi 7mm mune max
Ultrasonic yekucheka muchina kunyorera:
Yedu Ultrasonic Welding muchina wakanyatsogadziriswa ma make-up mashandiro pane akasiyana maficha senge: kudzivirirwa kwezuva kana chero kumwe mashandiro pane ako ehunyanzvi machira kana asina kusukwa. Chekupedzisira, ichi chakachinjika uye chakazvimiririra chishandiso chinokugonesa iwe kuti uite dzakasiyana simbiso mapatani.*Ultrasonic tekinorojiinogona kushandiswa chete pazvinhu zvakagadzirwa zvemachira (zvine hushoma hwemashiripiti ekugadzira), thermoplastics kana chero chigadzirwa che thermo-fusible. Kuti uve nechokwadi, usazeze kutibata nesu kune ultrasonic yekucheka kana kuwedzeredza miedzo.
Uchishandisa mushini wekusonesa wakasarudzika unounza akateedzana ezvakanakira:
Kutsanya uye isingadhuri kuruka;
Hapana kudikanwa kwezvinhu zvinodyiwa senge tepi, clip kana glue;
Hapana kutonhora nguva uye kudzikisa mitengo yekugadzirisa
Hapana nguva yekupfura yeiyo stapler chishandiso;
Kutenderera mune kumwe kushanda
Hapana kudikanwa kwetsono, shinda, spools uye chero zviitiko zvine chekuita nekuenderana kwemavara, zvinyorwa, kumonera uye kugera;
Zvakatipoteredza-zvine hushamwari nekuti hazvidi chero zvinonamatira uye zvinonyungudutsa;
Mipendero inovharwa isina kusiya chero maburi ekusona, nekudaro ichidzivirira kupinda kubva kumakemikari vamiririri, utachiona hweropa uye zvimwe zvikamu.
Pashure: 2600w 20khz Yakakwira Simba Ultrasonic jenareta otomatiki yekutevera - Powersonic
Yakakwira Simba 20Khz Ultrasonic Welding System f ...
Steel Horn Ultrasonic Welding Chishandiswa Compact Ultr ...
15khz yakakwirira nemazvo ultrasonic welder & T ...
35Khz 800w Ultrasonic Kuisa Simbi Michina Rotary ...
Nzeve Loop Ultrasonic Welding Turu 20khz 2000w
20Khz kumhanya Ultrasonic chifukidzo muchina weDi ...